२१औं विश्वकप फुटबलमा ‘फ्लप’ स्टार को-को ? - Everest Dainik - News from Nepal
२१औं विश्वकप फुटबलमा ‘फ्लप’ स्टार को-को ?
मस्को । रसियामा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा धेरैं युवा खेलाडी चम्किएका छन् । तर एकताकाका उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका खेलाडी भने निकै कमजोर देखिएको छ । जसकारण उनीहरुको टिमले चाँडै घर फर्किनु पर्यो । जारी विश्वकपमा सबैभन्दा कमजोर अर्थात ‘फ्लप’ भएका ३ खेलाडी यी हुन्
१. डेभिड डे गेया
म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट गरिरहेको प्रदर्शनले डेभिडलाई विश्वको नम्बर १ गोलकिपरको रुपमा स्थापित गरेको थियो । तर, विश्वकपमा गरेको खराब प्रदर्शनपछि फुटबल समर्थक र विश्लेषकहरु पनि उनीबाट निराश भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस अन्तिम १६ मा पुग्ने टिमको छिनोफनो, स्थान जमाउने र घर फर्किने राष्ट्र को-को ? हेर्नस् सूचि
पोर्चुगल विरुद्ध गरेको गल्तीका कारण स्पेनले ३ अंक लिने मौका गुमायो भने अन्य ३ खेलमा पनि उनको प्रदर्शन सामान्य भन्दा निकै तल थियो । सबै ४ खेलमा उनले केवल १ बचाऊ गरे जुन उनको स्तरका लागि अचम्मको तथ्यांक हो ।
२. रोबर्ट लेवान्डोस्की
विश्वकप छनोटमा लेवान्डोस्की सर्वाधिक गोलकर्ता हुन सफल भएका थिए । छनोटमा गरेको १६ गोलका कारण उनी विश्वकपमा पनि गोल्डेन बुटको दाबेदार रहेको बुझिएको थियो । तर पोल्यान्डको अग्रपंक्तिमा उनको प्रदर्शन निकै खराब थियो ।
याे पनि पढ्नुस जारी विश्वकप फुटबलमा कसको कीर्तिमान के ? हेर्नुहोस्, तथ्य/तथ्यांक
उनले १ गोल वा असिस्ट पनि दर्ता गर्न सकेनन् र पोल्यान्ड समूह ‘एच’ को अन्तिममा रहन पुग्यो । २९ वर्षे बायर्न म्युनिख स्ट्राइकर लेवान्डोस्कीका लागि व्यक्तिगत रुपमा यो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता थियो तर उनी ‘फ्लप’ हुन पुगे ।
थोमस मुलर जर्मनीका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी रहँदै आएका छन् । २०१० र २०१४ को विश्वकपमा ५ ५ गोल गरेका मुलरबाट उस्तै प्रदर्शनको अपेक्षा गरिएको थियो । २०१७ १८ बुन्डेस लिगामा उनले सर्वाधिक असिस्ट दर्ता गर्दै विश्वकपका लागि आफू तयार रहेको पुष्टी गरेका पनि थिए । तर जर्मनीको खराब यात्रामा उनले १ गोल वा असिस्ट पनि गर्न सकेनन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलः अाज इंग्ल्याण्ड भर्सेस क्रोएसिया, को पुग्ला फाइनल ?
मेक्सिको र दक्षिण कोरियासंग पराजित हुंदै जर्मनी आश्चर्यजनक तरिकाले समूह चरणबाट बाहिरियो । मुलरले आफ्नो प्रतिभा र स्तरअनुरुप प्रदर्शन गर्न नसक्नु विभिन्न कारणहरुमध्ये एक पनि थिए । –एजेन्सी
ट्याग्स: David de gea, Fifa world cup 2018, robert lewandowski footballer poland, Thomas muller german footballer